အခြေခံ အားနည်းပါတယ် ဆိုသူတွေ ဖတ်ဖို့
တစ်ချို့က အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံအားနည်းတယ်ဆိုတာ Verb to be ဆိုတာ ဘာတွေမှန်းကို မသိတာမျိုး ။ I happy. တို့ I interest English. တို့ Can I teach? တို့ လုပ်တာမျိုး ? တကယ် အားနည်း တာပါ ။ အဲ့လို လူတွေက သာမန် ဆယ်တန်းအောင် ဘွဲ့ရတွေကို သင်ပေးတဲ့ အတန်းမှာ ဝင်တက်ရင် သိပ် အဆင်ပြေမှာ...
ကျွန်တော် ပြောပြချင်တဲ့ English ဘာသာစကားလေ့လာသူ အချို့ရဲ့ ခံယူချက် အလွဲတွေ အကြောင်း ( ၁ ) ၁။ ၃ လ နဲ့ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်ချင်တယ် ။ သင်ပေးနိုင်မလား ? ၂။ English ဘာသာစကားကို Native Speakers လို ပြောတတ်ချင်တယ် ။ ဘယ်လောက်ကြာအောင် လေ့လာရမလဲ ။ ၃ ။ စကားပြော လုံးဝ...
မိမိဘာသာ ‌လေ့လာလိုသူများ အတွက် – ၂
♦ English ဘာသာစကားကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လေ့လာနေတဲ့ လူတိုင်း သုံးနိုင်တဲ့ နည်းစနစ် ♦ ကျွန်တော် ညွှန်ပေးထားတဲ့ Cambridge - Interchange ( Intro/1/2/3 ) သင်ရိုးကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဝယ်ပြီး လေ့လာနေကြတာကို ပြန်ကြားရလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ။ တကယ် လေ့လာတဲ့အခါမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ၊...
English စကားလုံး ၊ အသုံးအနှုန်း အသစ်တွေကို စွဲစွဲမြဲမြဲ မှတ်မိ အသုံးချနိုင်အောင် ဘယ်လို လေ့လာရမလဲ ? ဒီနေ့ သင်လိုက် ၊ နောက်နေ့ ပြန်မေ့သွားလို့ ပြန်သင်ရလိုက် ၊ နောက်တော့ ရသွားပေးမယ့် နည်းနည်းကြာတော့ ပြန်မေ့သွားလိုက် ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ချစ်တပည့်တွေ အတွက် ဒီစာလေးကို...